Hoggaamiyaha la dilay Cabdiweli Shiikh Cali. [Sawir Hore]
Ciidamada badda Talyaaniga ee ilaalada ka haya xeebaha Soomaaliya oo qabtay lix nin oo looga shaki qabo burcadbadeed
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada badda Talyaaniga ee ilaalada ka haya xeebaha Soomaaliya ayaa qabtay lix nin oo looga shaki qabo burcadbadeed, sida ay bayaan ku sheegeen howlgalka ciidamada badda ee Yurub (EU NAVFOR). Dhacdada ayaa 24 [...]
Xagee maraysaa badbaadinta doonida ganacsi ee ku caariday xeebta Boosaaso?
Boosaaso-(Puntland Mirror) Shaqada badbaadinta doonida xamuulka sida ee xumaatay ayaa maraysa meeshii ugu dambeysay, sida ay sheegeen howlwadeenada. Shiikh Fuaad Aflow, oo kamid ah howlwadeenada, ayaa warbaahinta u sheegay in hadda ay wadaan dhiggidii kunteenarada [...]
Diyaarada siday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo loo ogolaaday in ay kacdo kadib saacado xayiraad ah
Muqdisho-(Puntland Mirror) Diyaarada siday Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed iyo Xasan Shiikh Maxamuud ayaa loo ogolaaday in ay kacdo kadib saacado xayiraad ah garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Saakay, diyaarada qaadi lahayd labada masuul [...]